Fsnd သင်တန်း setting ကို ILS?
Fsnd သင်တန်း setting ကို ILS?3နှစ်ပေါင်း2months ago #644
ငါ defualt 747 နှင့်၎င်း၏တကယ်ကောင်းတဲ့များအတွက်အဆင့်မြှင့်ယာဉ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပြီ, ဒါပေမယ့်ငါရှိခြင်းပါပဲတစ်ခုတည်းသောပြဿနာဈတစ်ခု ILS ဆင်းသက်တက်သည်သတ်မှတ်ထားဖို့လိုတဲ့အခါသင်တန်းခေါင်းစဉ်တင်ထားရန်မည်သည့်လမ်းဖြစ်လည်းမထင်ထားဘူးဖြစ်တယ် ယခင်ယာဉ်ပေါ်တွင်သင် nav display ကိုမှတဆင့်ထားပေမယ့်အသစ်ကတဦးတည်းရှိ gpws စနစ်ကယင်း၏ nolonger ရှိပါတယ်ကတည်းက။
(Edit ကို) ဒါဟာဒီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/55/568
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မှု - ဖြင့် ricsmi.
Fsnd သင်တန်း setting ကို ILS? လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ပေါင်း 1 လ #645
က glideslope ချသူ့ဟာသူအတွက်လမ်းညွှန်အဖြစ်ငါများသောအားဖြင့်က ILS သို့သော့ခတ်သည့်အခါကဲ့သို့ပင်သင်တန်းနှင့်အတူနှောငျ့ယှကျကြပါဘူး။
သင်ရုံဒီတော့ငါ mouse ကိုသုံးစွဲဖို့မအဘို့အခညျြနှောငျ (ကျနော် CTRL + SHIFT + N ကိုတို) ကိုသင့်လျော်ဘောင်ဖို့ NAV1 ထား. , GPS စနစ်ကနေ NAV မှ nav mode ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ရှိသည်။
Fsnd သင်တန်း setting ကို ILS? လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ပေါင်း 1 လ #646
ok အိုးငါကဆင်းသက်စဉ်ကာလအတွင်းလျော့နည်း faffage ဆိုလိုတယ်အဖြစ်ကိုသိရတာကောင်းပါတယ်, သင်တန်း setting ကိုအကြောင်းကိုအံ့သြစရာကိုပြု၏။ XD
Fsnd သင်တန်း setting ကို ILS? လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ပေါင်း 1 လ #647
yeah ငါပဲသင့်လျော်ဘောင်မှ Nav 1 set, ငါ Eh ပေါ့တခါ .... လေဆိပ်၏ 20mi အတွင်းနှင့်လေယာဉ်ပြေးလမ်းနှင့်အတူတက်စီတန်း (ကျနော်ရှည်လျားချဉ်းကပ်ကြိုက်တယ်) နှင့် FL300 န်းကျင်မှာငါက GPS ကနေလှန်မယ် Nav ငှါ၎င်း, "ဘောလုံး" ငါသည် VOR လော့ကျွန်း (အနည်းဆုံးငါကအရမ်းရယ်ရတယ်ယခုအချိန်တွင်ငါ CS ကို C-130 အတွက်ရယ် LOL အဘယ်သို့မိန့်င်ထင်) မှ, APP ကလှန်ကြောင့်ပဲ့ပြင်ပါစေပါလိမ့်မယ်ပေါ်လာလျှင် ငါ့ကို။ ငါ ALT HLD အလင်းပေးသောအချက်မှာချွတ်ဝင်သည်အထိငါ့အမြင့် drop လိမ့်မယ်လည်းမြင့်မားသောင့်လျှင်, ကိုယ့်စီးဘို့တလျှောက်ပေါ့အရမ်းရယ်ရတယ်
0.406 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်